Apple bụ nnọọ otutu na-abịa elu na omume na ndị dị mfe iji na ịwụnye. Otu onye dị otú omume bụ iDVD nke mere ndụ nke ọrụ mfe na akụkụ nile. Kasị mma na ndị mbepụ echiche na e agbakwunyere n'ime usoro ihe omume mere ya otu nke kasị mma na ndị kasị elu usoro. Ọ bụ n'ihi na kasị nso-nso mgbakwunye na nke atụmatụ na usoro ihe omume dị ka a omimi maka ọtụtụ ọrụ na ha bụ mgbe online nduzi. A nkuzi nakwa na e dere na pacify al dị otú ahụ ọrụ nke mere na ha nwere ike inwe na n'ozuzu kasị mma arụmọrụ nke usoro ihe omume na mmekọrita DVD ọrụ na-rụrụ na nke a.
Nkebi nke 1: Olee otú iji iDVD?
Nkebi nke 2: Top 5 iDVD Nkuzi
N'okpuru bụ ụfọdụ nke nkiti ọrụ nke ọ bụla iDVD onye ọrụ kwesịrị ịma na ha na e kọwara n'ụzọ zuru ezu na iji hụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma pụta na mmekọrita na ojiji nke usoro ihe omume. The atụmatụ ndị dị mfe iji na itinye:
Iji mee ihe nke usoro ihe omume ọ na-gwara mbụ niile na-n'ozuzu interface nke usoro ihe omume nke mere na ọrụ abịa mara na arụmọrụ nke akụkụ dị iche iche nke usoro ihe omume. The interface nke iDVD bụ dị ka ndị na onye ọrụ pụrụ ịhụ nkọwa nke onye ọ bụla akụkụ na e dere megide ya:
Onye ọrụ nwere ike pịa media button iji hụ na onye ọ bụla ụdị media na-emi odude dị ka kwa mkpa na ọchịchọ mgbe ọrụ a na-rụrụ n'elu iDVD:
Iji malite a ọhụrụ oru ngo onye ọrụ nke mbụ niile kwesịrị iji nweta ndị na-esonụ interface, nkọwa nke onye ọ bụla akụkụ e dere dị ka na foto n'okpuru:
Iji tọọ ngbanwe àgwà onye ọrụ nwere ike pịa oru ngo taabụ ime needful. The interface ebe a nwekwara dị iche n'otu ntabi na Ya mere ka mfe ojiji n'ozuzu nkọwa e dere nke mere na onye ọrụ na-mgbe mgbagwoju anya:
Ịgbanwe ndabara isiokwu ọ na-gwara na-eso ụzọ oru ngo> mgba ọkụ ọkọlọtọ (4: 3)
Iji tinye fim ma ọ bụ ụdị ọ bụla nke media onye ọrụ nwere pịa media bọtịnụ ma mkpa format a ga-kwukwara. Ịhọrọ faịlụ site na usoro ọ na-gwara pịa nchekwa nhọrọ na-eme needful:
Ozugbo aha ihe nkiri na-abụọ pịrị na aha menu egosi. Site na nke a menu onye ọrụ nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ dezie ederede a ga-atụkwasịkwara nkụnye eji isi mee faịlụ nke oru ngo n'okpuru Nkwadebe:
iDVD bụ ihe dị egwu software na nwekwara ike ime ka sideshows maka ọrụ. Na ala panel nke usoro ihe omume a ga-abụọ pịrị ikpughe zoro ezo menu. Site na nke a menu onye ọrụ nwere ike ime ka slideshows na ala. Ndị ọzọ functionalities nwekwara anya Ozugbo menu na-ekpughe:
The photos taabụ na nri panel a ga-enweta na-gbakwunye foto na yiri media na-ngosi mmịfe nke dị n'okpuru Nkwadebe:
The preview button bụ na-enwe ịgbakwunye ikwu n'ụzọ ndị dị iche iche na fim, oru na slideshows na-achọ edezi site iDVD:
Onye ọrụ nwekwara ike ịgbakwunye egwu na slide show. A na-achọ onye ọrụ ịghọta n'okpuru kwuru foto na zuru iji nweta na-aga na dị iche iche etoju nke na arụmọrụ a na-atụle:
The media nwekwara ike-atụkwasịkwara iji dobe mpaghara na enyemaka nke iDVD. Dobe mpaghara button na-emi odude na ala. Onye ọrụ dị nnọọ mkpa ka pịa ya ikpughe menu na nwere ike mgbe ahụ ga-eji na akara na ihe ndị a chọrọ nke onye ọrụ. N'ihi na iDVD ọ bụ mfe iji duzie media mgbakwunye na dobe mpaghara:
Mgbe na iji iDVD ọ na-gwara pịa iwu + (x) button iji nweta ederede menu mmanya. Ederede ma ọ bụrụ na ọ bụ-atụkwasịkwara nkiri nwere ike edited site na iji taabụ na e kwuru ka n'okpuru:
The ụzọ Dezie> họrọ niile buttons bụ na-eji ịgbanwe niile button shapes na-egosi n'ime iDVD window. The interface na-egosi na mmekọrita a menu nwekwara e kọwara na zuru mgbe ọ na-abịa na ọnụ ọgụgụ ahụ n'okpuru:
Na-enweghị na ịpị dobe mpaghara ma ọ bụ ederede jụrụ onye ọrụ nwere ike ịnweta menu Ama window site na ịpị menu. Nke a window bụ ihe kasị mma iji hụ na free n'ọnọdu họrọ nke ga-ekwe ka onye ọrụ ịkwaga bọtịnụ kpamkpam n'ime menu:
N'okpuru ebe a bụ n'elu 5 iDVD Nkuzi nke ọ bụla onye ọrụ nwere ike ịnweta na-isi nakwa dị ka elu ihe ọmụma nke usoro ihe omume na ala na afọ ojuju:
Na kasị mma fim na reviews ọ bụ otu n'ime ndị Nkuzi nke ga-ekwe ka onye ọrụ na nke kacha mma pụta na ịmụta yiri iDVD terminologies na ala. The n'ozuzu Ọdịdị nke usoro ihe omume dị mfe ịghọta na maka otu ihe ahụ ọ na-ukwuu tụrụ aro.
Ọ bụ a PDF faịlụ na enwere ike ịnweta site na njikọ nke e kwuru n'elu. The n'ozuzu terminologies e kọwara n'ụzọ zuru ezu na onye ọrụ nwere ike inweta ihe kasị mma nke ndị nkuzi na ala. Ozugbo a nkuzi a na-agụ na zuru ọ dịghị mkpa na nke ọ bụla ọzọ nkuzi na-agụ ma na-n'ihu na.
Nke a iDVD nkuzi bụ nke 13 nkeji n'ogologo. Mbụ mma bụ na ọ na-kwadoro site YouTube nke pụtara nnọọ n'efu ruo mgbe ebighị ebi. Nke abuo ya nwere ike ibudata enweghị ihe ọ bụla hassle. Ihe bụ isi atụmatụ nke iDVD tinyere mkpokọta software Ọdịdị e kọwara ihe n'ụzọ kasị mma na nke a.
Cheta ọganihu nwetara
Cheta ọganihu mmepụta mara maka ọrụ ọ na-eme na ubi nke Apple na ngwaahịa metụtara trainings. The ndị ọrụ na-adịghị ọbụna maara na ngwaahịa ie iDVD nwere ike zuru uru nke ndị nkuzi na bụ ugbu na URL kwuru n'elu na-echiche doro anya.
Apple nkuzi video
Ọ bụghị naanị na iDVD ma ndi nile yiri ngwaahịa nke Apple Inc. na-kọwara n'ụzọ zuru ezu na na maka otu ihe ahụ ọ na-ukwuu tụrụ aro niile novice ọrụ na-aga site a nkuzi n'ihi na ozugbo ka ha echiche doro anya n'ụzọ doro anya na ùgwù. The n'ozuzu okirikiri nhọrọ ukwuu nke saịtị bụkwa mfe na-eso na onye ọrụ nwere ike inwe arụpụta ihe kasị mma Ozugbo yiri iDVD ntụziaka na-soro na ala na afọ ojuju:
> Resource> DVD> iDVD nkuzi: Olee otú iji iDVD